Departemantan'ny R&D - Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
1.Masinina fanandramana dizitaly fanadinana nomerika no tena ampiasaina amin'ny fitsapana mihombo, faneriterena ary hiondrika amin'ny akora vy.
2.Ny (pendulo) tester misy fiantraikany dia ampiasaina hamantarana ny fiantraikan'ny akora vy sy fitaovana tsy vy manohitra ny fiatraikany eo ambanin'ny enta-mavesatra mavesatra mba hitsarana ny fananan'ny fitaovana eo ambanin'ny enta-mavesatra.
3.ny masinina fanapahana santionany metallographic dia masinina manelingelina ny santionany metalygraphic amin'ny alàlan'ny fampiasana kodiarana fitifirana lovia haingam-pandeha haingam-pandeha. Ampiasaina betsaka amin'ny fametahana laboratoara metallographic amin'ny metaly isan-karazany.
4.Mikraoskaopy metallographic mivadika dia mikraoskaopy eo amin'ny lampihazo ambonin'ilay tanjona.
Fampidirana fitaovana ho an'ny laboratoara
5.Ny masinina famolavolana metalygraphic misy singa fototra toy ny fototra, kapila, lamba poloney, fonosana poloney ary fonony. Ny môtô dia raikitra amin'ny fotony, ary ny tanany vita amin'ny taper amin'ny fanamboarana ilay kapila poloney dia mifandray amin'ny vatan'ny motera amin'ny alàlan'ny visy.
Ny lamba poloney dia mifatotra amin'ny kapila poloney. Aorian'ny fanodinana ny motera amin'ny alàlan'ny famindrana eo amin'ny fotony, ny santionany dia azo tsindriana amin'ny tanana mba hanaingoana ilay kapila polishing mihodina. Ny ranon-javatra poloney nampiana nandritra ny fizotran'ny famolavolana dia azo arotsaka ao anaty lovia efajoro apetraka eo akaikin'ny milina polishing amin'ny alàlan'ny fantson-drano ao anaty fitoeram-plastika miorina amin'ny fotony. Ny fonosana sy ny fonony dia manakana ny loto sy ny potipoti-javatra hafa tsy hianjera amin'ny lamba poloney rehefa tsy ampiasaina ilay masinina, izay misy fiantraikany amin'ny vokatry ny fampiasana.
6.Machinelographic santionany mialoha-fitotoana milina, amin'ny fizotry ny fanomanana santionany metallographic, ny fikolokoloana ny santionany dia dingana mialoha tsy maintsy ilaina alohan'ny anaovana poloney. Aorian'ny famafana mialoha ny santionany dia azo hatsaraina tsara ny fanomanana santionany.
Ny fahombiazana, ny milina mialoha ny fikosoham-bary dia natao tamin'ny alàlan'ny lafiny fikarohana sy fanangonana ny hevitra ary ny takian'ny mpampiasa isan-karazany. Mba hahafahana mamaly ny filan'ny fitaovana bebe kokoa alohan'ny fitotoana volo, ny savaivon'ny kapila fikosohan'ity milina ity dia lehibe kokoa noho ny an'ny vokatra ao an-toerana, ary ny hafainganan'ny fihodinan'ny kapila fitotoana dia tsy toa ny vokatra an-trano ihany koa, fitaovana tsara io ho an'ny santionany fitotoana mialoha.